Puntland: Camey oo ka laabtey Dacwad uu kusoo oogay Gaas [Akhri]
GAROWE, Puntland - Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar (Camey), Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu dib uga labtey Dacwad uu ka gudbiyay Madaxweynaha uu waqtigiisu dhamaadey, Cabdiweli Maxamed Cali "Gaas".
Camey ayaa sheegay inuu joojiyay dacawaddii u gudbiyay Maxkamadda sare ee Puntland 6-dii bishan, taasoo uu wakiil uga ahaa qareenada Cabdiweli Saciid iyo Sheekh Saciid Axmed Faarax kadib markii uu eegy duruufaha dalka ka jira.
Dacwadda ayaa ku aadaneyd Murankii ka dhashay Guddiga Ansixinta iyo Xalinta Khilaafaadka Gollaha Wakiiladda, ee isaga iyo Cabdiweli Gaas ay kala magacaabeen, taasoo ka dhalatay khilaaf xooggan oo labada mas'uul u dhaxeeya.
Puntland ma lahan xilligan Maxkamad Dastuuri ah, balse bedelkeeda kiisaska khilaafka madaxda sare waxaa dhageysata Maxkamadda sare. [Halkan ka akhri].
HALKAN KA AKHRI WARQADDA CAMEY:
Hagaanka Puntland oo kala qeybsamay kahor doorashada
Puntland 04.12.2018. 12:18
Camey ayaa laaley warqad kasoo baxday Gaas, waxaana cirka isku sii shareeray khilaafka...
GAAS: DF ayaa faragelin ku heysa doorashada Puntland, oo Camey u adeegsanaysa
Puntland 05.12.2018. 22:25
Musharax war kasoo saarey Guddiyada is-khilaafsan ee Doorashada Puntland
War Saxaafaded 04.12.2018. 13:50
Puntland: Musharixiin kahor yimid Guddiga uu Gaas magacaabey
Puntland 04.12.2018. 13:07
Isimada Puntland oo Bayaan culus kasoo saarey Doorashada [Daawo]
Puntland 24.12.2018. 18:23
M. C/raxmaan: Khilaafka Isimada Puntland waxaa mas’uul ka ah Gaas [Daawo]
Puntland 16.12.2018. 23:52
Camey: Aniga iyo Gaas waa inaan cafis ka dalbano shacabka Puntland [Daawo]
Puntland 23.12.2018. 23:32
Garyaqaanka Guud ee Puntland oo War kasoo saarey Khilaafka Gaas iyo Camey
Puntland 07.12.2018. 18:39
Dowladda Soomaaliya oo diiwaan-gelisay kiisas horleh oo ah Covid-19 27.05.2020. 17:30
Toogasho dad lagu laayey oo ka dhacday gudaha Sacuudi Carabiya 27.05.2020. 17:00
Dacwad laga gudbiyey Soomaali ku jira liiska uu Mareykanka ku raadjoogo 27.05.2020. 16:32
DF oo laga dalbaday in ay dirto guddi sameeya baaris ka dhan ah Waare 27.05.2020. 14:25
Koonfur Galbeed oo guulo ka sheegtay howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab 27.05.2020. 13:33
Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida siyaasi Jini Boqor 27.05.2020. 11:15